I-Old Miners Cottage, e-Abercanaid - I-Airbnb
I-Old Miners Cottage, e-Abercanaid
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMerryl
Le ndlu yabasebenzi basezimayini eqaqambileyo neyanamhlanje likhaya elizimeleyo elibandakanya amagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elisebenzayo kumgangatho wokuqala. Ngeli xesha umgangatho ophantsi unekhitshi kunye negumbi elikhulu lokuhlala / lokutyela elinokukhanya okuninzi. Igadi ibandakanya indawo yokutshixa iibhayisekile ezi-6, apho iipadi zingongezwa kunye nendawo yokuhlala ukuze usele kwaye uphumle.
Sibekwe ngokugqibeleleyo kwiBike Park Wales, iBrecon Beacons, Merthyr Rising, njl.
Indlu yabasebenzi basezimayini endala likhaya elizimeleyo elibandakanya amagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elisebenzayo kumgangatho wokuqala. Ngeli xesha umgangatho ophantsi unekhitshi kunye negumbi elikhulu lokuhlala / lokutyela elinokukhanya okuninzi kunye nendawo ekhuselekileyo. Igadi ibandakanya indawo yokutshixa iibhayisekile ezi-6, apho iipadi zingongezwa khona, ezinye zibonelelwa. Egadini kukho indawo yokuhlala ukuze uphuze kwaye uphumle, i-barbecue, indawo yomlilo kunye nomgca wokuhlamba.
Indawo yethu imalunga neekhilomitha eziyi-0.4 ukusuka kwipaki yebhayisekile eWales. Simalunga nemizuzu engama-20 ngemoto ukusuka kwiiBeacons zeBrecon kunye nemizuzu engama-40 ukusuka eCardiff.
4.94 · Izimvo eziyi-157
I-Old Miners Cottage ikwilali encinci ezolileyo yase-Abercanaid eyakhiwa ngeminyaka yoo-1850's, inokufikelela ngokulula kwiTaff Trail kunye ne-A470. Umzila weTaff udibanisa ubude ukusuka eCardiff ukuya eBrecon. Ilali inevenkile egcweleyo kunye nee-pubs ezi-3. Ukuba abo abathathi iTheyibhile yakho entle kukuhamba ngemizuzu emi-4, kunye neNtsebenziswano kunye nokunye okuninzi. I-cottage ibekwe ngaphakathi kufutshane ne-Merthyr Tydfil, eyayikade ilikomkhulu le-Iron yehlabathi, kwaye inonxibelelwano oluthe ngqo kwisikhululo sikaloliwe kunye nokumisa ibhasi. I-Abercanaid yimizuzu engama-40 ukuya eCardiff kunye nemizuzu eyi-15 ukuya kwiBrecon Beacons.
Umbuki zindwendwe ngu- Merryl
Iindwendwe ziya kuhlangatyezwa emnyango nesitshixo sekhaya kunye nengcaciso emfutshane malunga nokuba ziziphi na izinto ezibalulekileyo. Ukuba undwendwe ludinga uncedo okanye lunemiba ngoko baya kukwazi ukufowunela okanye bankqonkqoze emnyango. Siya kuba nakho ukubabonelela ngolwazi malunga neendawo ezingqongileyo. Kwakhona ulwazi olubanzi lweBike Park, iBrecon Beacons kunye nezinto ezinomtsalane ngakumbi kunye namagugu afihliweyo.
Iindwendwe ziya kuhlangatyezwa emnyango nesitshixo sekhaya kunye nengcaciso emfutshane malunga nokuba ziziphi na izinto ezibalulekileyo. Ukuba undwendwe ludinga uncedo okanye lunem…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Abercanaid